(अन्तरवार्ता) भुत्ते भएको ट्रेड युनियनलाई धार लगाउन मेरो उम्मेदवारी– राई - www.biratsandesh.com
(अन्तरवार्ता) भुत्ते भएको ट्रेड युनियनलाई धार लगाउन मेरो उम्मेदवारी– राई
आज (मंगलबार) देखि नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसको छैटौं राष्ट्रिय महाधिवेशन काठमाडौंमा सुरु भएको छ । युनियनको नेतृत्वका लागि दुईवटा समूह प्यानल नै बनाएर यतिबेला चुनावी मैदानमा उत्रिएको छ । पुष्कर आचार्य समूहबाट विराटनगर निवासी अजयकुमार राई खुल्ला उपाध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । राई लामो समयदेखि श्रमिक आन्दोलनमा क्रियाशील, ट्रेड युनियन कांगे्रस आबद्ध हुनुका साथै याताायात मजदुर संघको एक पूर्ण अवधि केन्द्रीय सदस्य, महासचिव र लगातार ३ अवधि अर्थात् १५ वर्ष केन्द्रीय अध्यक्ष भइसकेका छन् । लामो समयदेखि इन्टरनेशनल ट्रान्सपोर्ट वर्कस फेडेरेशन, लण्डनका एसिया प्रशान्त क्षेत्रको कार्यसमिति सदस्यसमेत भइसकेका राईसँग चुनावी एजेण्डा, भावी योजनालगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानीको सार–
यो तपाईंहरूको महाधिवेशन के नारामा सम्पन्न हुन गइरहेको छ ?
दिगो विकासका लागि मर्यादित रोजगारी—सुदृढ लोकतन्त्र र आर्थिक समृद्धि हाम्रा जिम्मेवारी भन्ने मुल नारासहित छैठौ राष्ट्रिय महाधिवेशन काठमाडौंमा यही जेठ २९ देखि ३१ गतेसम्म सम्पन्न गर्न गइरहेका छौं । यो हामी प्रजातन्त्रवादी श्रमिकहरूको चाड र उत्सव पनि हो ।
पुष्कर आचार्य समूहबाट खुला उपाध्यक्षतर्फ मेरो उम्मेदवारी हो । मैले लामो समयसम्म यातायात मजदुर संघमा रहेर यातायात श्रमिकका पक्षमा काम गरें र यसपटक ट्रेड युनियन कांगे्रसमा बसेर सबै प्रकृतिका श्रमिक कर्मचारी साथीहरूका हकअधिकारका पक्षमा काम गर्नका लागि र मैले लामो समयसम्म संघमा काम गरेको अनुभवलाई व्यवहारमा उतार्न पनि हो मेरो उम्मेदवारी ।
तपाईंलाई किन प्रतिनिधिहरूले सहयोग गर्ने ?
म संगठक हो जस्तो पनि लाग्छ । मेरा टिमका सबै साथीभाइहरूको सहयोगले यातायात मजदुर संघलाई संस्थागत रुपमा स्थापित गरेको छु । म आफू लामो समयदेखि श्रमिक आन्दोलनमा समर्पित छु, यो श्रमिक आन्दोलन राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा बुझेको छु । विदेशी श्रमिक आन्दोलनका नेता तथा विदेशी ट्रेड युनियनहरूसँगको सम्बन्ध राम्रोसँग स्थापित गरेको छु । त्यो सम्बन्धलाई ट्रेड युनियन कांगे्रस आबद्ध सदस्यहरूलाई सहयोगका रुपमा उतार्न सक्छु । ऊर्जावान् ढंगले नयाँ सोच र प्रविधिका साथ काम गर्ने लक्ष्य राखेको छु । मैले बुझेको ट्रेड युनियन भनेको र्याडिकल हुनुपर्दछ । तर, त्यो अहिले भुत्ते भएको छ । त्यसलाई धारिलो बनाउन पनि हामीजस्तो ऊर्जावान् व्यक्तिहरू आउनुपर्दछ भन्ने लाग्दछ । र, म जहिले पनि वर्गीय आन्दोलनका अभियन्ता भएकाले पनि सबै साथीहरूले सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा राख्दछु ।
नेपाली ट्रेड युनियन आन्दोलनको के–के चुनौती छन् अहिले ?
वर्तमान कम्युनिष्ट सरकारले बहुमतको दम्भमा मजदुर संगठनहरूलाई निस्तेज पार्न खोेजेको अनुभूति भइरहेको छ । मन्त्रीहरूले ट्रेड युनियनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू सार्वजनिक रुपमा बोल्दै हिंडेकाले प्रथम चुनौती त्यही नै देख्दैछु म । लामो समयदेखि कार्यरत शिक्षकहरूको स्थायी नगरेको अवस्था छ । कारखाना श्रमिकका विपक्षमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन ल्याइएको छ, त्यो चुनौती छ । नयाँ श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐन आएको छ । त्यो नियमावली बनाइकन लागू गराउनुपर्ने अवस्था छ । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै रोजगारीहरू औपचारिक क्षेत्रबाट अनौपचारिक हुँदैछ । त्यो सबलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने चुनौतीसमेत रहेको छ । हाम्रो समूहले विजय हासिल गरेमा ती सबै मुद्दाहरूमा प्रतिबद्ध भएर समाधानका लागि लाग्ने प्रणसमेत गर्दछु ।
त्यस संस्थाको वैदेशिक सम्बन्धबारे कसरी अगाडि बढाउने सोच्नुभएको छ ?
ट्रेड युनियन कांगे्रस भनेको अन्य भातृ संस्थाजस्तो हैन । यसको आफ्नै छुट्टै प्रकारको विशेषता छ र वैदेशिक सम्बन्ध रहेको छ । अहिले पहिलेभन्दा वैदेशिक सम्बन्ध अलि कमजोर जस्तो देखिन्छ । त्यसर्थ त्यसलाई बलियो बनाउन म लागिपर्नेछु । म लामो समयसम्म इन्टरनेशनल ट्रान्सपोर्ट वर्कस फेडेरेशनको एसिया प्रशान्त क्षेत्रको सदस्य भएको र भारतीय ट्रेड युनियन महासंघका नेताहरूसँग पनि मेरो व्यक्तिगत सम्बन्ध राम्रो रहेकाले आपसी भाइचारा कायम गर्दै सालमा १–२ वटा अध्ययन भ्रमणको व्यवस्था गर्नेछु । र, म इमान्दारीका साथ भन्छु मलाई ट्रेड युनियन कांगे्रसको पदाधिकारी भएर विदेश जान रहर चाहिं छैन । म २४ वर्षको उमेरमा अविवाहित हुँदै गरेको समयमा संगठनबाट १ हप्ते ट्रेड युनियनको तालिममा जर्मन गएको हुँ । यदि त्यस्तै थियो पैसा कमाउने रहर थियो भने म पलायन पनि हुन्थें होला, त्यसपछि पनि पटक–पटक वैदेशिक तालिम, बैठकका लागि विश्वमान चित्रका विकसित देशहरू गएको छु । तर, मैले मेरो जीवन नै यो श्रमिक आन्दोलनमा लगाउनुपर्छ भनिकन आन्दोलनलाई छाडेर पलायन भएको व्यक्ति पनि हैन ।
तपाईं महासंघको पदाधिकारीका लागि जुनियर हुनु भो भन्ने कुरा रहेछ नि ?
म पहिलोपटक तपाईंबाट यो कुरा सुन्दैछु, कसैले संघमा काम ग¥यो होला कसैले महासंघमा काम गर्यो होला । संघमा ३–३ अवधि करिब १५ वर्ष राष्ट्रिय अध्यक्ष चलाउँदा र अन्तर्राष्ट्रिय संगठनको समितिमा बसेर काम गर्दा पनि जुनियर होइन्छ भन्ने मेरो भन्नु केही छैन । १५ वर्षदेखि निरन्तर ट्रेड युनियन कांगे्रसको राष्ट्रिय समितिभित्र सदस्यका रुपमा क्रियाशील छु । माओवादी द्वन्द्वकालमा समेत देशभर संगठन गर्दै हिंडेको छु । अब जुनियर सिनियरको मापदण्ड के हो मलाई बुभ्mन कठिन भो । त्यो पोजिसनका लागि त्यो व्यक्ति काविल छ छैन भन्ने पनि हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । मेरो क्षमतालाई देखेर केही साथी अत्तालिनु भएको चाहिं होला कुरा त्यत्तिमात्र हो ।
तपाईंको जितको आधार के हो नि ?
लामो समयदेखि देशभर संगठन गर्र्दै हिंडेको व्यक्ति हुँ म । सबै साथीभाइलाई चिन्छु । आजभन्दा ट्रेड युनियन कांगे्रसले एमालेनिकट मजदुर संगठनसँग संयुक्त रुपमा करिब १ महिने प्रशिक्षक बनाउने तालिमबाट बनाएको ट्रेड युनियन विषयको प्रशिक्षक पनि हुँ र त्यसको माध्यमबाट मैले धेरै साथीहरूलाई तालिम दिलाउने अवसर प्राप्त गरेको छु । तिनै प्रशिक्षार्थी कोही आबद्ध संघको अध्यक्ष, महासचिव, जिल्ला टे«डको अध्यक्षहरू हुनुभएकाले ती सबै साथीहरूबाट सहयोग पाउँदैछु । त्यो मेरो जितको आधार पनि हो । म निरन्तर आन्दोलनमा छु । कहीं कतै विचलित भएको छैन र म कहिं कतै ट्रेड युनियनको नाममा पलायन भएको पनि छुइन् । मैले यातायात मजदुर संघ छाड्दै गर्दा यातायात मजदुर संघको कार्यालयलाई व्यवस्थित बनाएर छाडेको छु । चैतमा भएको संघको अधिवेशनमा सबै कार्यसमिति निर्विरोध चयन गराउन सफल भएँ । त्यो नेतृत्व गर्ने क्षमता भएर नै होला । त्यसर्थ यी सबै कारणहरू मेरा जितका आधार हुन् र म ढुक्क छु ।
प्रस्तुति– मीनकुमार नवोदित
प्रकाशित मिति : २९ जेष्ठ २०७५, मंगलवार १५:०८
आयोजक झापा पुग्यो झापा गोल्डकप फुटबलको फाइनलमा
नेपालको ऐतिहासिक सफलता, २० वर्षपछि एसियाडमा रजत पदक जित्न सफल
भारतीय क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान अजीत वाडेकरको निधन
प्रधानमन्त्री ओली अस्वस्थ, भिडभाडमा नजान डाक्टरको सुझाव
तिब्बती धर्म गुरु दलाइ लामा अस्पताल भर्ना
सम्पादक नवोदितसहित ५ जना सम्मानित
नेपाल आइडलबाट बाहिरिए सुर्खेतका सुविन सिंह
झोराहाटमा मदन भण्डारीको जीवनीमा आधारित ‘बर्बरिक’
सर्जिमिन गर्दा गर्दै वडा सदस्यको मृत्यु
विश्वकप खेल्ने बंगलादेशी क्रिकेट टोलीको घोषणा
यस्तो छ दिपक बज्राचार्यको मन मगनको हिन्दी भर्जन- ‘मनका मगन’ (भिडियो )
प्रदेश १ को नामाकरण र स्थायी राजधानी तोक्न छलफल सुरु